Dalka Jabuuti oo ciidamo gaaraya 850 u soo diraysa Soomaaliya
Jabuuti:-Afhayeenka ciidamada AMISOM Col. Paddy Ankunda ayaa sheegay in dalka Jabuuti uu ciidamo gaaraya 850-askari u sóo diri doono dalka Soomaaliya si ay uga mid noqdaan ciidamada AMISOM e haatan ku sugan Muqdisho.
Col. Paddy Ankunda ayaa saaka saxaafada u sheegay in 850 askari oo ka socda dalka Jabuuti ay bishan Novembar iman doonaan magaalada Muqdisho .Ciidamada AMISOM ee ku sugan haatan magaalada Muqdisho ayaan ka kala yimid wadamada Burundi iyo Uganda waloo aan si rasmi ah u cadeyn tiradooda.
Col. Paddy Ankunda ayaa yiri “Ciidamada Jabuuti ka imaanaya waan soo dhaweynaynaa. waxaana la gaarsiin doonaa ciidamada AMISOM sanadkan ilaa 12000, oo askari.”
Afhayeenka AMISOM Col. Paddy Ankunda ayaa mar uu ka hadlay dagaalada ka dhaca Muqdisho ayuu sheegay in uu jiro khasaaro soo gaara ciidamada AMISOM balse ay ka guuleysteen inta badan dagaaladii ay la galeen ciidamada Al-Shabaab.